Catsuit ထုတ်ကုန်များစက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Catsuit Products ထုတ်လုပ်သူများ
Sexy လက် ၀ တ်တာရှည်တာရှည်လက်အိတ်ရော်ဘာတာရှည်ခံ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Sexy လက် ၀ တ်ရော်ဘာရော်ဘာချိတ်လက်ချောင်းအရှည်လက်အောက်များပစ္စည်းအမည် - လက်ရှည် glossy rubberized hook finger လက်ရှည်ရှည်လက်အိတ်အမျိုးအစား - လိင် - မိန်းမ - အရောင် - အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) - ES, EM, EL အသွင်အပြင် - ထုတ်ကုန်တွင်ပါဝင်သည်။ ချောမွေ့မှု၊ ကြင်နာမှု၊ ချောမွေ့မှု၊ နူးညံ့မှုနှင့်မြင့်မားသော elasticity တို့၏စရိုက်လက္ခဏာများမှာလည်း spandex latex တိပ်၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ergonomics ကိုအပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ သင့်အရေပြားတိုင်းလက်မမှန်ရှိ spandex latex c နှင့်မှန်မှန်ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်အတွက် ...
Sexy Miniskirt ပန်းရောင်ရိုးရှင်းသောတင်းကျပ်သောစကပ်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Sexy Miniskirt ပန်းရောင်ရိုးရှင်းသောစကပ်တို့ပစ္စည်းအမည် - ရိုးရှင်းသောတင်းကျပ်စကတ်ကျား - မ - မိန်းမ - အရောင် - ပန်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်အရွယ်အစား - စင်တီမီတာ၊ အီးအက်၊ အီးအီးအသွင်အပြင် - ဤရိုးရှင်းသောတင်းကျပ်သောစကတ်ကို Lycra ဝါဂွမ်းမှ Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သင့်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီး sexy ဖြစ်စေနိုင်သည့်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှအပတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သင်၏အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီး Lycra ဝါဂွမ်းမှသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမှုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်သည် elasticity နှင့် wrapping ခံစားမှုကောင်းမွန်သော elastic lycra ပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင် ...
ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲရေကူး Surfing ဝက် ၀ တ်ဘောင်းဘီတစ်ပုဒ်အမျိုးသားရေကူး ၀ တ်စုံအမျိုးသား ၀ တ်စုံအင်္ကျီရေကူး ၀ တ်စုံ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ပြိုင်ပွဲရေကူး Surfing တစ်ဝက်ဘောင်းဘီတစ်ထည်ရေကူး ၀ တ်စုံအမျိုးသားဝတ်တင်းကျပ်အင်္ကျီရေကူးဝတ်စုံတစ်စုံတစ်ရာရေကူး ၀ တ်စုံအမျိုးသားဝတ်ဘောင်းဘီအင်္ကျီကျား၊ မ - လိင်: အထည်အရောင် - အနက်ရောင်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) ES, EM, EL, EXL အသွင်အပြင်။ Swimsuit Men's Tight Vest သည် Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Lycra ဝါဂွမ်းသည်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှတရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီး sexy ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီး Lycra ဝါဂွမ်းမှသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ရင်းနှီးမှုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: လေးဖက်မြင်အမြင့်ဆန့်ကတ္တီပါပူနွေးသည့်လည်ပင်းမြင့်လည်ပင်းရှည်လက်ရှည်တီရှပ်ဂျပိန်ပါးလွှာသောအောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီပစ္စည်းအမည်: တင်းကျပ်စွာလျောက်ပတ်သောအောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီလိင် - အထီးအရောင် - အနက်ရောင်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ): ES, EM, EL , EXL EXXL အသွင်အပြင် - ဒီကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီကို Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သင်၏အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီး Lycra ဝါဂွမ်းမှသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ရင်းနှီးမှုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
elastic အားကစားအားကစားယောဂကြံ့ခိုင်ရေးသည်ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္Baseာန်အ ၀ တ်အထည်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်
Feature: ဤယောဂကြံ့ခိုင်မှုအားအင်္ကျီကို Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Lycra ဝါဂွမ်းသည်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်နှင့်လိင်မှုကိစ္စဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Lycra ဝါဂွမ်းဒီဇိုင်းအကျီင်္အကျီင်္၏အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော elasticity နှင့် wrapping ခံစားမှုရှိသည့်မြင့်မားသော elastic lycra ပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ ထုတ်ကုန်ကိုအထူ ၀.၂ မီလီမီတာသာရှိသော Mercerized Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ elasti ရှိပါတယ် ...
Sexy ဖက်ရှင်အဝတ်အစားမြွေသည်အနက်ရောင် sexy ရှပ်အင်္ကျီအောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီကိုပုံနှိပ်ပေးသည်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Sexy ဖက်ရှင် underwear မြွေပုံနှိပ်အနက်ရောင် sexy ရှည်ရှည်လက်ရှည်တီရှပ်အောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီပစ္စည်းအမည်: ဖက်ရှင်ခံအဝတ်အစားမြွေပုံနှိပ်အနက်ရောင် sexy ရှည်လက်ရှည်တီရှပ်အောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီလိင်: အထီးအရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) ES, EM , EL, EXL, FS, TL အသွင်အပြင်လက္ခဏာ - ဤရှည်လျားသောလက်ရှည်ရှပ်အင်္ကျီအောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီကို Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Lycra ဝါဂွမ်းသည်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှတရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကို ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေနိုင်သည်။ သင့်အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေခြင်း ...
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Sexy ဖက်ရှင်ဂျင်းဘောင်းဘီတိုလက်တိုတီရှပ်လက်တိုတီရှပ်ပစ္စည်းအမည် - တင်းကျပ်ရေခဲပိုးလက်တို - လိင် - အထီးအရောင် - အနက်ရောင်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) ES, EM, EL, EXL အသွင်အပြင် - ဤတင်းကျပ်သောရေခဲ ပိုးတိုတိုလက်ကို Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Lycra ဝါဂွမ်းသည်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီး Lycra ဝါဂွမ်းမှသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအနီးကပ်ဆုံးခံစားမှုရှိသည်။ ထုတ်ကုန်သည် g el ဖြစ်သော elastic lycra ပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အမျိုးသားများ၏နေအိမ် Yoga ကြံ့ခိုင်ရေး Corset အင်္ကျီတစ်လုံးလုံးအင်္ကျီတစ်ခုလုံးကိုယ်အင်္ဂါအင်္ကျီအောက်ခြေ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အမျိုးသားများအတွက်အိမ်တွင်းယောဂကြံ့ခိုင်ရေး Corset တစ်လုံးတည်းအင်္ကျီအိတ်တစ်လုံးလုံးကိုယ်အင်္ဂါအင်္ကျီအင်္ကျီပစ္စည်းအမည်: ကြံ့ခိုင်တောင့်ကိုယ်အင်္ဂါအင်္ကျီအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလိင် - အထီးအရောင် - အနက်ရောင်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) ES, EM, EL, EXL, TL, FS Feature - ဤ Fitness Corset One-piece အင်္ကျီကို Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Lycra ဝါဂွမ်းသည်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီး Lycra ဝါဂွမ်းမှသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအနီးကပ်ဆုံးခံစားမှုရှိသည်။
ဆောင်းရာသီအမျိုးသားဝတ်ဘောင်းဘီရှည် Casual Plus ကတ္တီပါ PU အစင်းဒီဇိုင်းဘောင်းဘီရှည်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဆောင်းရာသီအမျိုးသားဝတ်ဘောင်းဘီရှည် Casual Plus ကတ္တီပါ PU အစင်းဘောင်းဘီရှည်ပစ္စည်းအမည်: PU အစင်းပါသောဘောင်းဘီများလိင် - အထီးအရောင် - အနက်ရောင်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) - ES, EM, EL, EXL, EXXL, E3XL အသွင်အပြင် - မြင့်မားသော elastic PU အစင်းပါသောဘောင်းဘီ လေးဖက်မြင်မြင့်မားသော elasticity လေးမျိုးပါရှိသည်။ ၁၈% ချဲ့နိုင်သည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ချုပ်ရိုးနှစ်ထပ်ဇစ်အလှဆင်သုံးဖက်မြင်ရောင်ခြည်ခြေထောက်များနှင့်နွားသငယ်ပတ်ထည်ဒီဇိုင်းကပေါင်များကိုပိုမိုပါးလွှာစေသည်။
အမျိုးသား ၀ တ်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သောခြေထောက်ဘောင်းဘီတိုဂျင်းဘောင်းဘီဂျပိန်ဂျင်းဘောင်းဘီ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အမျိုးသားဝတ်လေးဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်ဘောင်းဘီဂျင်းဘောင်းဘီဂျင်းဘောင်းဘီအ ၀ တ်အစား: ပုံစံဂျပိန်ဂျင်းဘောင်းဘီလိင် - အထီးအရောင် - အပြာရင့်ရောင် (စင်တီမီတာ) ES, EM, EL, EXL, EXXL, E3XL အသွင်အပြင် - ဤပုံစံဂျပိန်ဘောင်းဘီ ဂျင်းဘောင်းဘီကို Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ Lycra ဝါဂွမ်းသည်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီး Lycra ဝါဂွမ်းမှသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအနီးကပ်ဆုံးခံစားမှုရှိသည်။ ထုတ်ကုန်သည်မြင့်မားသော elastic lycra ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အမျိုးသားစီး Zipper ဆေးရိုက်ဒီဇိုင်းဆန်းလက်ရှည်ဂျင်းဘောင်းဘီလက်ကားပါးလွှာဂျင်းဘောင်းဘီအမျိုးသားဝတ်ဘောင်းဘီ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အမျိုးသားစီး Zipper ဆေးရိုက်ဒီဇိုင်းပါးလက်ရှည်ဂျင်းဘောင်းဘီလက်ကားရင့်ပါးသောဂျင်းဘောင်းဘီအမျိုးသားဝတ်ဘောင်းဘီအမျိုးအစား: အမျိုးသားအမျိုးသားဇစ်ထုပ်ပါးလွှာသောဂျင်းဘောင်းဘီဂျင်းလိင် - အထီးအရောင် - အပြာရင့်အရွယ်အစား (cm) - ES, EM, EL, EXL, EXXL, E3XL အသွင်အပြင် - အမျိုးသားဝတ် Zipper Printed Slim Pants Jeans သည် Lycra ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Lycra ဝါဂွမ်းသည်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီး Lycra ဝါဂွမ်းမှသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်နီးကပ်မှုတို့ကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်သည်။
Cotton Men Tight ဘောင်းဘီတိုများနှင့်ပုံမှန်ဘောင်းဘီများကိုစစ်ဆေးပါ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ချည်ထည်အကျီင်္များနှင့်ကျပန်းဘောင်းဘီများကိုစစ်ဆေးပါကုန်ပစ္စည်းအမည် - အမျိုးသားတင်းကျပ်သောဘောင်းဘီတိုလိင် - အထီးအရောင် - စင်တီမီတာအရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) ES, EM, EL, EXL, EXXL, E3XL အင်္ဂါရပ် - ဤအမျိုးသားဝတ်စုံဘောင်းဘီတိုကို Lycra မှပြုလုပ်ထားသည်။ ဝါဂွမ်း၊ Lycra ဝါဂွမ်းသည်အလှအပနှင့်အနုပညာအလှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အသားအရေနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီး Lycra ဝါဂွမ်းမှသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအနီးကပ်ဆုံးခံစားမှုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်မှာအလွန်မြင့်မားသော elasticity နှင့် wrapping ခံစားမှုရှိသည့်မြင့်မားသော elastic lycra ပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။